KhitLuNge - Page 36 of 88 -
အခုအချိန်ထိ လူပျိုကြီးဖြစ်နေရခြင်း အကြောင်းရင်း (၅) ချက်
အခုချိန်ထိ လက်တွဲဖော်မရှိဘဲ တစ်ကိုယ်တည်း လူပျိုကြီး ဖြစ်နေသူတွေ Shwemom ပရိသတ်ထဲမှာ တော်တော်များများ ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချို့ဆိုရင် ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ အိမ်ထောငရက်သားကြလို့ …
ဖုန်းရေစိုတဲ့အခါတိုင်း ဆန်စေ့တွေထဲ ထည့်လိုက်တဲ့နည်းလမ်းက မှန်ကန်ရဲ့လား … ?
တော်တော်များများကတော့ ဖုန်း ရေစိုပြီဆိုရင် ဆန်စေ့တွေထဲကို ထည့်လိုက်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း သူများလုပ်လို့ လိုက်လုပ်တာလို့ ဆိုပါတယ်။ တစ်ချို့တော့ ရေစိုတဲ့ဖုန်း အမြန်ခြောက်အောင် …
နေရပ်တောင်မေးမြန်းမရသည့် လူနာထံပါလာသည့် ငွေသိန်း(၂၀၀)
နေရပ်တောင်မေးမြန်းမရသည့် လူနာထံပါလာသည့် ငွေသိန်း(၂၀၀)ခန့်အား လူမှုကယ်ဆယ်ရေးပရဟိတအဖွဲ့မှ ထိန်းသိမ်းပြီး ပိုင်ရှင်ထံ ပြန်လည်အပ်နှံခဲ့ 25.2.2020 ရက်နေ့ မုဒုံ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေး လူနာတင်ယာဉ်ကွန်ယက်မှ …
ရုရှ S-300 စနစ်က ကမ္ဘာမှာ အသုံးမကျဆုံး လေကြောင်းရန်ကာစနစ်လို့ တရုတ် ပြော
ဆီးရီးယားမြို့တော် ဒမတ်စကပ်ကို အစ္စရေးတိုက်ခိုက်တာကို မတွန်းလှန်နိုင်ခြင်းကြောင့် ရုရှရဲ့ S-300 “Favorit” လေကြောင်းရန်ကာစနစ်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသုံးမကျဆုံး လေကြောင်းရန်ကာစနစ်ဖြစ်တယ်လို့ တရုတ်နိုင်ငံက …
အိပ်ခါနီးမှ စားသင့်တဲ့အစားအစာများ နှင့် လုံးဝမစားသင့်သော အစားအစာ ( ၁၀ ) မျိုး
ကျွနု်ပ်တိုရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက်သာမကပဲ နောက်နေ့မှာစိတ်ကြည်စေဖို့အတွက် ကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်ဖို့ လိုပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ ညစာအဖြစ်စားတဲ့ အရာပေါ်မူတည်ပြီး ကလေး တယောက်လိုအိပ်ပျော်လား အိပ်မပျော်တဲ့ ရောဂါဖြစ်လားဆိုတာကွဲပြားသွားပါတယ်။သင်အိမ်မက်ကောင်းတွေမက်ပြီး အိပ်ပျောိစေဖို့အတွက် …
လမ်းတွေပျက်နေတာကို အစိုးရသိအောင် ချိုင့်ခွက်တွေထဲမှာ အမျိုးသားအင်္ဂါပုံများ လိုက်လံရေးဆွဲ
တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ လမ်းပေါ်ရှိချိုင့်ခွက်များပတ်လည်တွင် အမျိုးသားလိင်အင်္ဂါပုံများရေးဆွဲကာ ချိုင့်ခွက်များကိုဖာထေးပီးလမ်းကိုပြုပြင်ဖိုလိုအပ်နေကြောင်းကို သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ ဟိုက်လိုက်လုပ်ပြထားပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းဟာတကယ်ကိုအလုပ်ဖြစ်တဲ့ပုံပါပဲ။ လမ်းတွေရက်အနည်းငယ်တွင်းပြုပြင်ပီးစီးတာကိုတွေ့ရသလောက်ကတော့။ ဒေသခံတွေကတော့ မစ်ဒယ်ဘရော့မှ “power of …
သင်ဖုန်းကိုင်တဲ့ပုံစံက ပြောပြနိုင်တဲ့ သင့်ရဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်နဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား
၁။လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ကိုင်တဲ့ပုံစံ သင်ကဖုန်းကိုလက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ကိုင်သုံးတတ်သူဆိုရင်သင်ဟာအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အချစ်ရေးမှာတော့ကွဲပြားတယ်relationship တစ်ခုကိုမစခင်မှာသင်ဟာဒီလူကိုတကယ်ပဲဘဝအတွက်လိုအပ်သလားဆိုတာကိုအချိန်ယူစဉ်းစာတယ်ဒါကြောင့်လူတွေကသင့်ကိုတစ်ယောက်တည်းနေတတ်တယ်ရှက်တတ်တယ်လို့ထင် ကြတယ်။ ၂။ဖုန်းကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ကိုင်ပြီးနောက်လက်ရဲ့လက်မနဲ့ဖုန်းသုံးတဲ့ပုံစံ သင်ဟာစမတ်ကျတယ်အမြော်အမြင်ရှိတယ်။ကျိုးကြောင်းဆီလျှော်စွာတွေးတတ်တယ်သင်ဟာတစ်ခုခုမလုပ်ခင်မှာကြိုတင်စဉ်းစားတတ်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အချစ်ရေးမှာတော့အမြော်အမြင်ရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအချစ်ရေးမှာဆုံးဖြတ်ချက်မြန်မြန်ချတတ်တဲ့အတွက်သင့်ရဲ့relationshipsကိုထိခိုက်စေတတ်ပါတယ်ဒါအပြင်အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်သင်ဟာအလွန်ပဲဝေဖန်အကဲဖြတ်တတ်ပါတယ်။ ၃။လက်၂ဖက်လုံးနဲ့ဖုန်းကိုင်ပြီးသုံးတဲ့ပုံစံ သင်ဟာဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့မှန်ကန်စွာချတတ်တဲ့လူမျိုးပါ။မရင်းနှီးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာတောင်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြုမူတတ်တယ်အချစ်ရေးမှာတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးသင့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်လွန်ကဲမူကသင်နှစ်သက်တဲ့သူကချည်းကပ်လာတဲ့အခါအဆင်မပြေတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်သင့်ကိုရှိန်နေတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ၄။လက်တစ်ဖက်နဲ့ဖုန်းကိုင်ပြီးနောက်လက်ရဲ့လက်ညှိုးနဲ့ဖုန်းသုံးတဲ့ပုံစံ သင်ဟာသင့်ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုနည်းလမ်းကောင်းကောင်းနဲ့ဖြစ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်တယ်တီထွင်ကြံဆနိုင်စွမ်းရှိသူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အချစ်ရေးမှာတော့တီထွင်နိုင်စွမ်းဟာရှက်စိတ်အဖြစ်ပြောင်းသွားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့သင့်ကိုရင်းနှီးဖူးတဲ့လူတွေကတော့သင့်ရဲ့personality ကိုချီးကျူးမိကြတယ်။ Writer …
လပေါ်မှာ နျူကလီယားဗုံးဖောက်ခွဲလိုက်ရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ .. ?
လ ဆိုတဲ့ ဂြိုလ်သိမ်ကြီးဟာ ကမ္ဘာကိုပတ်နေခဲ့တာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း ၄.၅ သန်းခန့်လောက်ထဲကပါပဲ။ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အတက်အကျ ၊ ဒီရေ နဲ့ သတ္တဝါတွေရဲ့ …
စိတ်ကောက်နေတဲ့ချစ်သူကို ချော့ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း (၃)ခု
စိတ်ကောက်နေတဲ့သူကို ချော့ရတာ ဘယ်လောက်တောင် ခက်သလဲဆိုတာ ခံစားဖူးမှာပါ။ လူ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူဘူးဆိုပေမယ့် များသောအားဖြင့်တော့ စိတ်ကောက်ကြသူတွေဟာ လွယ်လွယ်နဲ့ …
တစ်နေ့ကို အရက်တစ်ခွက်ပုံမှန်ယောက်ပါက အသက် ၉၀ အထိနေနိုင်ပါတယ်တဲ့
အရက်သောက်တယ်ဆိုတာ ကောင်းတယ် မကောင်းဘူး အစရှိသဖြင့် လူတော်တော်များများက အခုထိငြင်းခုန်နေကြဆဲပါ။ တစ်ချို့ကြတော့လဲ အရက်သောက်ကောင်းအောင် ကိုယ်လိုရာဘက်ဆွဲတွေးသလို တစ်ချို့ကြတော့လဲ အရက်သောက်တာ အသည်းခြောက်တယ်၊ …
Previous 1 … 35 36 37 … 88 Next
ရခိုင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် COVID 19 ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ရေး လက်ဆေးရန် ရေမရှိ၊ အသက်ကို ဖက်နှင့်ထုပ်ထားရဟုဆို
သေပြန်ပြီး ရွှေကုက္ကိုလ် Lockdown ချထားတော့ သွားစုံစမ်းဖို့ခက်တယ် . . .
တမူးတွင် လူစုလူဝေးမလုပ်ဖို့အမိန့်ကို မလိုက်နာဘဲ မင်္ဂလာဆောင်သည့် သတို့သားကို အမှုဖွင့်အရေးယူ
အင်းစိန်က Covid-19 စောင့်ကြည့်လူနာ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်ထဲကို တိမ်းရှောင်
ကိုရိုနာကပ်ဘေးကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံး ဝရုံးသုဉ်းကားဖြစ်နေချိန် မြောက်ကိုရီးယားက ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်နှစ်စင်းကို ပစ်လွှတ်ပြန်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းမှားတွေ ဖော်ပြပါက ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ် ချမှတ်နိုင်
ရန်သူတွေ အသုံးချနိုင်တာကြောင့် အမေရိကန်စစ်တပ်အတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သတင်း မထုတ်ပြန်ရန် ဆုံးဖြတ်
စပိန်တော်ဝင်မင်းသမီးတစ်ပါး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံး
အသက် ၃၀ အရွယ်မှာစတင်ကျင့်သုံးသင့်တဲ့ ချွေတာရေးနည်းလမ်းများ
Copyright © 2020 KhitLuNge.